सावधान ! तपाईँको फेसबुक अरु कसैले त चलाएको छैन ?
वैशाख : कतै तपाईँको फेसबुकको पासर्वड अरुलाई त थाहा छैन ? तपाईँको फेसबुक तपाईँले थाहा नपाइकन कसैले लुकेर त चलाइराखेको छैन ।
यदि तपाईँलाई आफ्नो फेसबुक कसैले चलाइराखेको छ कि भन्ने डर छ भने त्यो डर हटाउनुहोस् । कहिलेकाहीँ कसैको मोबाइल वा ल्यापटपमा तपाईँले फेसबुक खोल्नुभएको थियो र लगआउट गर्न बिर्सनुभयो भने पनि तपाईँलाई समस्या पर्न सक्छ ।